Saron-tava majika an'i Harry Potter an'ity artista amerikana | Famoronana an-tserasera
Eny ary, tsy hoe miova ho Harry Potter Toy ny misy ihany, saingy miaraka amin'io tsipika io, araka ny aseho amin'ny horonantsary, ny sarontava dia avy amin'ny mainty mankany amin'ny sarintanin'i Marauder. Amidiny ao amin'ny tranombarotra an-tserasera izy ireo ary miomana satria majika tanteraka izy ireo.
Stephanie Hook no mpanakanto ao ambadik'ireto maska ​​masina ireto izay manana fahaizana manova araka izay azontsika atao amin'ny intuit amin'ilay horonan-tsary aseho. Mianara momba ny majika ao ambadik'ireo saron-tava miorina amin'ny tontolon'ny Hogwarts ireo.
Hook dia afaka namorona sarontava majika izay afaka mandeha amin'ny mainty mankany amin'ilay sarintanin'i Marauder an'ny tontolo potera harry. Ny mahatsikaiky dia izao dia tsy misy ao amin'ny Etsy ny pejinao; angamba misy ifandraisany amin'ny zon'ny fananana.
Ao amin'ny horonantsary nakarina tao amin'ny TikTok, Miseho mitafy sarontava mainty tsotra i Hook izay miova tsimoramora ho sary iray amin'ny sarintany Marauder avy amin'ny franchise Harry Potter. Ity horonan-tsarimihetsika Hook voalohany ity dia nahazo fankafizana maherin'ny 400.000 ary nitazona azy hamidy ity sarontava ity amin'ny fivarotana an-tserasera.
Amin'izao fotoana izao, ankoatry ny pejy vokatra ao amin'ny magazay an-tserasera miaraka amin'i Shopify, tsy ampy tahiry koa izy io, ka mila faharetana kely vao mahazo iray.
Nanazava i Hook fa saron-tava izy izay nandany 17 ora hanao iray noho ny loko izay ampandehanan'ny hafanana ary noho izany omeo io mazoto io. Ny tena ratsy indrindra, ity sarontava mazika miorina amin'ny tontolon'i Harry Potter ity dia ho voafetra, ka araho hatrany any amin'ny fivarotanao manandrana mahazo iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ilay sarontava mahira-tsaina sy majika miova ho Harry Potter
Ity misy vaovao amin'ny fampiharana horonantsary Creative Cloud nohavaozina